Ụbọchị My Pet » Olee otú Mkpapụ onye si Dog Park
Kere a, na ị na-atụba frisbee gị furry enyi na mpaghara nkịta Park na ị na-achọpụta gị nwere mkpụrụ obi ma ọ bụ nwunye na anya. Kedu ihe ị na-eme ugbu a? Site mbụ malite akara ndibiat maka a ụbọchị, anyị weere na ụfọdụ Atụmatụ na-esi na-akpa onye si nkịta ogige.
NDỤMỌDỤ #1: Gị kụziere Dog ihe na-adọrọ mmasị atọ
Ezie na ọ dị mma ikwu na onye ọ bụla na nkịta n'ogige ntụrụndụ hụrụ nkịta, e nwere ihe na-nwere maka nkịta nke maara ihe egwu-nke kwesịrị atọ. Site na iji ihe inconspicuous iwu, ị pụrụ ịkụziri gị nkịta a atọ na ọ bụghị nanị na-enye gị mmadụ ma ga-amara ndị ọzọ.
NDỤMỌDỤ #2: Ka Gị Dog Play na ndị ọzọ na-Nkịta
Na-egosi na gị na nkịta bụghị nanị na mmasị ndị ọzọ nkịta ma-enwe mmasị na-egwuri egwu ha na-eme gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mfe ijekwuru. Plus ma ọ bụrụ na ị na-eme kụrụ ya anya, gị nkịta ga nwere ga-ebi n'okpuru otu ụlọ ma ọ dịghị onye chọrọ-eweta a nkịta na-adịghị na ndị ọzọ na. Ihe bụ isi bụ na gị nkịta ịbụ ndị enyi mbụ.
NDỤMỌDỤ #3: Malite na a ukporo Kparịtara
Ma ọ bụ a mara mma ụbọchị ma ọ bụ eziokwu na ma gị nkịta na-egwuri egwu na ibe, tie elu a ukporo mkparịta ụka. Ọ bụ n'oge a na mkparịta ụka, ị ga-amụta ihe banyere onye a. Malite anya ngwa ngwa ma na-ahụ ebe ọ na-eduga.
NDỤMỌDỤ #4: Exchange nọmba ekwentị maka a Doggy Ụbọchị
Ozugbo ị na-ekwu ihe ole na ole dị iche iche ugboro, ịjụ mgbe ha na-emekarị na-abịa nkịta ogige. Mgbe ahụ na-atụ aro na ị gbanwere nọmba na-ahazi a doggy ụbọchị. Nke mbụ a na ụbọchị ga-agaghị adị ka na-emenye ụjọ dị ka ọ na-elekwasị anya gburugburu gị nkịta.
NDỤMỌDỤ #5: Ịgbatị a Ụbọchị Òkù – Ọ dịghị Nkịta
Ozugbo ị mara na ha nwere mmasị, jụọ ha si na a nri abalị ụbọchị. Ịnagide ke ọzọ na-akpachi anya ọnọdụ sans nkịta ga-eduga ọbụna miri mkparịta ụka na Olileanya nke ga-eduga ihe ọzọ.
Na ndị a Atụmatụ, ị maara ugbu a kpọmkwem ihe na-eme oge ọzọ ị na-ahụ na cutie na nkịta ogige.